Wejiga iyo jirka oo qolofta leh guriga - Waa maxay tillaabooyinka la raacayo? | Bezzia
Susana godoy | 13/10/2021 12:00 | Quruxda
Waxaa jira midabyo, badeecado iyo tallaabooyin badan oo ay tahay inaan qaadno haddii aan rabno inaan daryeelo maqaarka oo ay na siiso daryeelkaas si tartiib ah. Taasi waa sababta mid ka mid ah tallaabooyinkan waa inay noqotaa wajiga iyo jirka oo qolofta guriga. Sababtoo ah waxay haystaan ​​wax walba oo runtii aan u baahanahay inaan muujino natiijo aad u soo jiidasho leh.
Miyaad taqaan waxa dhabta ah diirka wajiga iyo jirka? Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa waxa uu mid walba noo keeno iyo dabcan, tallaabooyinka lagu gaarayo natiijo ka wanaagsan sidii aan filaynay. Ha seegin wax kasta oo soo socda maxaa yeelay si raaxo leh ayaad ugu samayn kartaa gurigaaga wayna kaa yaabin doontaa.
1 Ma loo baahan yahay in wajiga iyo jirka la diro?
2 Nadiifintu waa tallaabada koowaad ee maqaarkeenna
3 Alaabooyinka gaarka ah ee maqaarkaaga
4 Kareemka fuuq -celinta ee aan ka maqnayn dhammaystirka wajiga iyo jidhka ka -soo -baxa guriga
Ma loo baahan yahay in wajiga iyo jirka la diro?
Dabcan, wajiga iyo jirka oo la fuqo waa lagama maarmaan. Waayo? Sababtoo ah Tilmaan -bixintan fudud waxaan ka dhigi doonaa nadiifinta mid qotodheer, tirtiridda unugyada dhintay ilbidhiqsi, si maqaarku mar kale u soo noolaado oo dib ugu soo muuqdo si siman oo caafimaad leh. Xaqiiqdii marka aad taas ogaato waxaad ogaan doontaa muhiimadda muhiimka ah ee tilmaanta quruxda sida tan oo kale ah. Sababtoo ah haddii aan macsalaameynno unugyada dhintay, ma siin doonno maqaarkeenna fursad uu dib ugu soo noolaado. Marka, waxaan ku macsalaameyn doonnaa khadadka wanaagsan laakiin sidoo kale iinnada.
Nadiifintu waa tallaabada koowaad ee maqaarkeenna
In kasta oo aysan ahayn kii ugu dambeeyay ama tallaabada kaliya ee ay tahay inaan qaadno, haddana waa inaan fiiro gaar ah siino. Sababtoo ah maqaar nadiif ah oo dhab ah ayaa asaas u noqon kara soo kabasho wanaagsan. Marka, si loo nadiifiyo, wax la mid ah sharadka alaabada aasaasiga ah ayaa sidoo kale ah jellada nadiifinta ama biyaha micellar. Tani waxay noqotay mid ka mid ah badeecadaha ugu iibinta wanaagsan, maxaa yeelay runtii si qoto dheer ayay u nadiifisaa waxayna ku habboon tahay ka tagista maqaarka saliidda leh. Adigoon iloobin in sidoo kale hal tilmaam aad ku macasalaamayn karto qurxiyo. Adigoon iloobin inay sidoo kale ku fiicnaan doonto maqaarka ugu nugul.
Alaabooyinka gaarka ah ee maqaarkaaga
Si aysan u noqon mid aad u murugsan oo wajiga iyo jirka diirkoodu si dhakhso ah ama ka sii saxsan yahay, waxaan had iyo jeer adeegsan karnaa badeecadaha aadka u gaarka ah. Kaliya Waa inaan ku marmarinaa maqaarka oo mar uun ku jirnaa, waa inaan sameynaa duugis wareegsan oo jilicsan si badeecadu si fiican ugu dhex gasho aag kasta. Waxa kale oo run ah in habkan lagu samayn karo badeecadaha aan dhammaanteen guriga ku haysanno sida yogurt iyo dhawr dhibcood oo liin dhanaan ah, tusaale ahaan. Waa run markaan dooranno badeecadaha aan iibsanno, waxaan ognahay kiis kasta tirada ama halabuurka aan u baahan nahay.
Iyadoo taas leh dhammayn exfoliating in ay leeyihiin wax soo saarka qaar ka mid ah waxaan sidoo kale gaari karnaa natiijooyin weyn. Maadaama wasakhda si aan ula kac ahayn looga saari doono Wax asaas u ah sidoo kale lama huraan ah haddii aan rabno inaan mar kale aragno sida maqaarkeennu weli u dhawrsan yahay xagga jilicsanaanta.
Kareemka fuuq -celinta ee aan ka maqnayn dhammaystirka wajiga iyo jidhka ka -soo -baxa guriga
Kareemka qoyaanku waa mid kale oo ka mid ah asxaabteena weyn waanan ognahay. Sidaa darteed, ma jiro wax la mid ah ka faa'iideysiga daqiiqad kasta si aad u adeegsato. In kasta oo ay muhiim tahay subaxdii iyo habeen walba in maqaarku sii fuuqsado, haddana xaaladdan ayaa ka sii badan. Sababtoo ah ka dib marka la sameeyo diirka waxay ku fiicnaan doontaa in la isku dayo in maqaarkeena la dejiyo. Markaa, waa inaan ku dabaqnaa midka aan ognahay inuu u fiican yahay nooca maqaarkeenna waana intaas. Alaabada saxda ah, sedex talaabo oo kaliya waxaad awood u yeelan doontaa inaad samayso wajiga iyo jirka oo si fiican u raaxaysta. Toddobaadkiiba mar waxaadna dareemi doontaa isbeddelada si dhakhso ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Sida loo sameeyo diirka wajiga iyo jirka oo wanaagsan guriga